Sandals Foundation waxay bixisaa si loo soo celiyo Smith's Reef Snorkel Trail
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Turks iyo Caicos Breaking News » Sandals Foundation waxay bixisaa si loo soo celiyo Smith's Reef Snorkel Trail
Caribbean • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • Investments • News • Waajib ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Turks iyo Caicos Breaking News • Wararka kala duwan
Sandals Aasaasiyo tabarucaad si loo soo celiyo raadadkii snorkel reef
Aragtida xiisaha leh ee nidaamka deegaanka ee biyaha hoostooda ee Smith's Reef Snorkel Trail ayaa dhammaantood lagu wadaa inay sahamiyaan bulshooyinka maxalliga ah, ardayda, iyo martida caalamiga ah iyada oo ay ugu mahadcelinayaan shaqada dhaqancelinta ee ay maalgeliso Sandals Foundation.
Raadku wuxuu dib u furayaa dib u habeyn lagu soo dhoweeyay oo loogu talagalay horumarinta waxbarashada badda, nolosha. iyo hab nololeedka.
Shaqadan muhiimka ah waxay xaqiijineysaa ilaalinta nolosha badda ee xiisaha leh, badbaadada qiijiyeyaasha, iyo nolol waarta oo kuwa nolol ka kasbadaan isticmaalka marinka doomaha u dhow.
Sandals Foundation waxay ku darsatay qiyaastii US $ 30,000 dadaalkan.
Xuska Maalinta Badaha Adduunka oo dhacday bishan, Sanduuqa Turks iyo Caicos Reef oo kaashanaya Waaxda Deegaanka iyo Kheyraadka Xeebaha ayaa si sharaf leh dib ugu furay in ka badan 20-sano jir ku dhow xeebta ka dib markii ay hirgeliyeen casriyeyn lagu qiimeeyay wax ka yar US $ 30,000 oo ka socda Sanduuqa Sandals.
Shaqooyinka dib u soo celinta waxaa ka mid ahaa nadiifinta iyo sii wadida dayactirka calaamadaha raad raaca snorkel, rakibida calaamadaha xeebta iyo buoys calaamadaha hareeraha goobta snorkel, soo bandhigida khadadka aagga dabaasha ee ka baxsan aagga snorkel si looga hortago qoob-ka-ciyaarayaashu inay si qalad ah u galaan kanaalka, iyo bixinta calaamadaha iyo tilmaamaha kale ee tixraaca dammaanadda ah.
Heidi Clarke, Agaasimaha Fulinta ee Sandals Foundation ayaa ku faraxsanaa inaan arko dib u furista goobta caanka ah, iyadoo la timid fursado waxbarasho joogto ah iyo sahamin dhaqaale.
Calaamadaha cusub ee jidadku waxay ku kordhin doonaan khibrada waxbarasho ee hodanka ah ee ardayda iyo xubnaha bulshada maxalliga ah ee awood u yeelan doona inay horumariyaan qaddarin qoto dheer oo ku saabsan fahamka sida ay iyaguna gacan uga geysan karaan ilaalinta khayraadka dabiiciga ah ee quruxda badan, ”ayuu yidhi Clarke.
Furitaanka goobta ayaa ah mid aad u muhiim ah, Clarke ayaa sii waday, oo hal ku dhig looga dhigay Maalinta Badaha Adduunka ee sanadkan, “Wuxuu ku xiraa muhiimada Badweynta iyo waxa aan si fiican u wada naqaano ee muwaadiniinta reer Caribbean - nolosheena iyo nolosheena. Bedka badda waa qeyb ka mid ah aqoonsigeena gobol ahaan waana ku faraxsanahay inaan dib u furno boggan quruxda badan ee snorkel dib loogu soo celiyo adeegyadii la soo celiyey si aan loo ilaalin oo keliya nidaamyada deegaanka ee dabiiciga ah ee jira laakiin sidoo kale nolosha iyo hab-nololeedka dadka la wadaaga kheyraadkiisa. ”
Alizee Zimmermann, Agaasimaha Fulinta ee Hay'adaha Turkiga iyo Caicos Reef Fund ayaa mahadcelin u diray Hay'adda Sandal's Foundation ee shaqooyinka soo celinta Smith ee Reef.
“Smith’s Reef waa goob caan ku ah xeebta digaagga oo ay ku raaxaystaan ​​dadka deegaanka iyo booqdayaashuba. Dadaallada dib-u-soo-celinta waxay u sameeyeen meel badbaado leh khuurada, iyaga oo ku baraarujinaya halka marinka doontu ka bilaabmayo iyada oo lagu darayo khadka aagga dabaasha. Intaa waxaa sii dheer, giraanta snorkel lafteedu waxay u adeegtaa inay dadka ka fogeyso meelaha jilicsan, jilicsan ee reef, iyadoo la ilaalinayo dhuxulkeena nugul inta oo dhan iyada oo la raacayo snorkeler-ka safar xog-bixin ah iyada oo loo marayo meeleynta calaamadaha raad-biyoodka. Calaamadaha xeebta iyo khariidadaha biyaha celiya laakiin dib loo cusbooneysiin karo waxay tani ka dhigi doontaa waayo-aragnimo xiiso leh, waxbarasho iyo xusuus leh dhammaan. ”
Turks & Caicos waxay hoy u tahay xayndaabka saddexaad ee ugu weyn adduunka iyada oo in ka badan hal milyan oo safar ah ay ku soo qulqulaan jasiiradda sannad kasta si ay u sahamiyaan waxyaabaha yaabka leh ee badda.
Isagoo ka hadlaya xafladdii furitaanka ee Trail ee lagu fuliyay qawaaniinta nabadgelyada ee adag, Maareeyaha Guud ee Beaches Turks iyo Caicos, James McAnally wuxuu ku dhawaaqay in, "Maaddaama warshadaha dalxiiska ee jasiiraddu ay sii socdaan dhabbahooda sare, goobta cusub ee snorkel-ka ee dib loo furay waxay noqon doontaa mid lagu soo dhoweeyo xiisaha badda. raadinaya.
Martida ku sugan Xeebaha Turks iyo Caicos Resorts, McAnally ayaa ku daray, "waxaa lagu dhiirigelin doonaa in ay sahamiyaan raadadka snorkel iyaga oo qalabkooda biyaha ka soo qabanaya aagga loo dalxiis tago ee 'Aqua Center' oo ay u lugeeyaan xeebta gaaban goobta ay sidoo kale u furan tahay dadweynaha."
Xeebaha Coral-ka waxaa loo hanjabay dhammaan Kariibiyaanka iyo Badweynta Atlantik. Agagaarka xeebta agteeda waa hanti qaali ah maadaama ay u oggolaadaan martida fursad hal-nooc ah si ay si fudud ugu galaan una bartaan nidaamka deegaanka ee yaabka leh. Dib u cusbooneysiinta Smith's Reef Snorkel Trail waxay bilaabatay dabayaaqadii 2019 laakiin dib u dhacyo badan ayaa ku yimid bilowga cudurka COVID-19.
Mashruucu wuxuu sii wadaa iskaashigii soo jireenka ahaa ee udhaxeeyey Turkiga iyo Caicos Reef Fund iyo Sandals Foundation oo sanado badan hirgeliyey howlo dhowr ah oo ku aaddan ilaalinta joogtada ah ee meelaha badda ee jasiiradda.